Agoonta oo wax barashadooda lakafaalo qaadey(Sawiro) | ururka badbaado
Agoonta oo wax barashadooda lakafaalo qaadey(Sawiro)
Published on August 6, 2015 by ururkaba · 2 Comments
Iyadoo ay dalka kajiraan dhibaatooyin isbiirsadey oo kadhashey colaadaha iyo abaaraha kusoo noq noqdey dalka ayaa waxaa taas kadhashey in qofkasta naftiisa iyo qooyskiisa haddii uu kaalintooda buuxiyo in uusan awood u helin kaalmeeynta dadka kale marka laga reebo wax xoogaa dadka samafalayaasha ay ee awooda leh ay u qabtaan shicibkooda iyo Muslimiinta guud ahaan.
Ururka Badbaado ayaa markii ugu horeeysey waxa uu tallaabo u qaadey dhanka wax u qabashada agoonta dadka uu u adeego, iyadoo tirada haatan ururka u diwaan gashey ee wax loo qabanayo ay gaarayaan illaa afartan ardey.
Ardeyda ayaa laga bixin doonaa qarashaadka uga bax tacliinta iyo gaadiidka xilliga ay aadayaan waxbarashada.
Halkaan hoose ka daawo ardeyda maanta Ururku kafaalo qaadey iyo waalidiintooda oo la isku sawirey, Golaha dhaqanka Saruur ee soo aruuriyey agoonta iyo Maamulka Ururka ee Laanta Soomaaliya.
maashaa Allah maanta ayaan dareemayaa in beertaan lumcadeeynay ey roobsatay cagaar kasoo dhashay oo eey limaad mareyso insha Allah waxaan rejeynayaa inaan arki doono anagoo haraceeda miraheeda guraneyno insha allah dadaalkeenana aan sii kordhino dadaalaa gaaree
wada jirkeena waa guusheena wada cunisteena waa sharafteena wax baristeena waa horumarkeena wax tabaceena waa baahibeelkeena ceel qodisteena waa nolosheena isbitaal dhiskena waa cafimadkena aan dadaalno dadaalaa guushiisa gaaree